राष्ट्रिय Archives | Page 58 of 59 | Daily State News
२६ बैशाख २०७४, नेपालगन्ज- रुकुम चौरजहारी नगरपालिकामा नेपाली कांग्रेसबाट मेयर पदमा उम्मेदवारी दिन धेरै लागिपरेका थिए। तर, पार्टीले करिब एक महिनाअघि नेपाल बैंक लिमिटेडको जागिरबाट रिटायर्ड भएका बलवीर गोसाइँलाई टिकट दियो। ‘आर्थिक रूपमा सशक्त हुनु र पार्टीका जिल्ला सभापतिसँग राम्रो सम्बन्ध भएकाले उहाँले टिकट पाउनुभयो,’ कांग्रेसनिकट एक कार्यकर्ताले भने, ‘पार्टीमा राजनीतिक लगानी गरेको भन्दा पनि […]
२६ बैशाख, पोखरा । पश्चिमाञ्चलका सबै जिल्लामा चुनावी सुरक्षा तयारी पूरा भएको क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय पोखराले जनाएको छ । चुनाव हुनुपूर्व, चुनावको समय र चुनावपछिको अवस्थालाई समेत मध्यनजर गरेर सुरक्षा प्रवन्ध मिलाइएको छ । क्षेत्रीय प्रशासक यामकुमारी खतिवडाले भनिन्, ‘निर्वाचनको समयमा कुनै घटना भएको पाँच मिनेटभित्रै प्रहरी घटनास्थलमा पुगेर सुरक्षा दिने ब्यवस्था मिलाएका छौं ।’ […]
सुर्तीजन्य पदार्थमा अब शतप्रतिशत चेतावनीयुक्त चित्र: स्वास्थ्यमन्त्री थापा
२५ बैशाख, काठमाडौं । नेपाली बजारमा बिक्री वितरण गरिने सुर्तीजन्य पदार्थको बट्टा र प्याकेटमा शतप्रतिशत भाग ओगट्ने गरी चेतावनीमुलक चित्र वा सन्देश छाप्न लगाउने तयारी सरकारले गरेको छ । सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रणका लागि नेपाल सरकारले दुई वर्ष पहिले ७५ प्रतिशत चेतनावनीयुक्त चित्र तथा सन्देशलाई बढाएर ९० प्रतिशत बनाएको थियो । यद्यपी, कतिपय नेपाली सुर्ती उद्योगहरुले […]
२५ वैशाख काठमाडौं । शनिबार अबैध रुपमा हिमाल चढिरहेका दक्षिणी अफ्रिकी नागरिक रायन सिंह डेभिलाई पर्यटन विभागले नियन्त्रणमा लिएको छ । सगरमाथा ट्रेकिङ गर्ने अनुमति लिएका डेभिले अबैध रुपमा सगरमाथा आरोहण गर्ने प्रयास गर्दा बेस क्याम्पका पक्राउ परेका छन् । बेस क्याम्पमा आरोहणका अनुमति नै नलिएका ब्यक्ति देखिएपछि पर्यटन विभागबाट खटिएका सम्पर्क अधिकृतहरुले उनलाई सोधखोज […]
कैलालीमा ७ नं. प्रदेशकै पहिलो मेडिकल कलेज बन्दै
२५ वैशाख, कैलाली । कैलालीको गेटामा निर्माण हुने गेटा मेडिकल कलेजको सोमबार शिलन्यास गरिएको छ । गेटा मेडिकल कलेज पूर्वाधार विकास समितिका अध्यक्ष डा. चेतराज पन्तले अस्पताल भवन, शैक्षिक भवन र प्रशासनिक भवनको एकै पटक शिलान्यास गरेका हुन । मेडिकल कलेज परिसरमा रहेका रुखहरुको कटानी आदेश ढिलो आएकोले निर्माण कार्यमा केही ढिलाई भएको हो । […]
४९ हजार ३३७ उम्मेदवार चुनावी मैदानमा उत्रिदै
२५ बैशाख, काठमाडौं । बैशाख ३१ गते पहिलो चरणमा हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा ४९ हजार ३३७ उम्मेदवारले प्रतिस्पर्धा गर्दैछन् । ३ वटा प्रदेश अन्तर्गत ३४ जिल्लाका २८३ स्थानीय तहमा चुनाव हुँदैछ । निर्वाचन आयोगका अनुसार बैशाख १९ गते उम्मेदवारी दर्ता गराई बैशाख २२ गते उम्मेदवारी फिर्ता लिएपछि कायम भएको उम्मेदवारहरुका संख्या ४९ हजार ३३७ रहेको […]
२५ वैशाख, काठमाडौं । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार १५ जेठमा सरकारले बजेट ल्याउनुपर्ने हुन्छ । निर्वाचन आयोगले दुई चरणका निर्वाचनको बीचमा बजेट ल्याउन आचारसंहिताले नदिने बताएको छ । प्रतिपक्षी एमालेले पनि बजेटपछि हुने निर्वाचन स्वीकार नहुने स्पष्ट पारेको छ । तर, यो जटिलताबारे प्रमुख दलहरुबीच गम्भीर छलफल नै भएको छैन । बालुवाटार स्रोतका अनुसार, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल […]
दुई दशकपछि हुन लागेको स्थानीय निर्वाचनको पहिलो चरण वैशाख ३१ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी भने मुलुकबाहिर हुनेछिन् । पहिलो चरणको मतदान हुनु दुई दिनअघि राष्ट्रपति भण्डारी थाइल्यान्ड हुँदै श्रीलंकाको औपचारिक भ्रमणमा जाँदैछिन् । उनी वैशाख २९ गते पाँचदिने औपचारिक भ्रमणका लागि श्रीलंकातर्फ प्रस्थान गर्ने कार्यक्रम छ । श्रीलंकासँग सीधा उडान नभएकै कारण उनी नेपाल एअरलाइन्सको […]
सुशीला श्रीमान विदामा बस्लिन् ? प्रचण्डलाई भेटेर ओलीले भने- अब मिलौं
सुशीला कार्कीका दुई विकल्पः विदामा बस्ने या अझै कडा हुने २३ बैशाख, काठमाडौं । शुक्रबार साँझ सर्वोच्च अदालतमा पुगेर हठात हाजिर गरेकी प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की आइतबारदेखि नियमित काममा र्फकँदैछिन् । तर, कार्कीका लागि आगामी जेठ २४ गतेसम्मको कार्यकाल सजिलो चाहिँ छैन । अब प्रधानन्यायाधीश कार्कीले नवराज सिलवाललाई आइजीपी बनाउनेदेखि शेरबहादुर देउवालाई अदालतको अवहेलनामा जेल हाल्नेसम्मका […]
चीनको ‘वान बेल्ट वान रोड’ परियोजनामार्फत नेपाल दक्षिण एसियाकै ‘हब’ बन्न सक्छ : चिनियाँ विज्ञ
नेपाल विज्ञ चिनियाँ प्राध्यापकले चीनले अघि बढाएको वान बेल्ट वान रोड (ओबर) मार्फत नेपाल दक्षिण एसियाको ‘हव’ बन्न सक्ने बताएका छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा कूटनीति विभागद्वारा बिहीबार आयोजित अन्तरक्रियामा दक्षिण तथा पूर्वी एसिया विज्ञ सिचुवान विश्वविद्यालयका प्राध्यापक योङ थाईले चीनको औपचारिक सञ्जाल दक्षिण एसियासँग कमजोर रहेकाले नेपालमार्फत त्यो सञ्जाललाई अघि बढाउन सकिने […]
सरकारसित दुई वर्षयता तपाईंंहरूको वार्ता चलेको चल्यै छ, किन अझै टुंगो नलागेको ? तपाईंले दुई वर्षअघिको सम्झना गराउनुभयो । त्यस बेला प्रचण्ड हामीसहित ३० दलीय गठबन्धनको संयोजकका रूपमा अगुवाइ गर्दै हुनुहुन्थ्यो । उहाँको नेतृत्वमा संघीयता, पहिचान, समावेशिताका मुद्दा, मधेसी जनजाति, आदिवासीका सवाल उठिरहेका थिए । उहाँ ती मुद्दा चटक्कै छाडेर कांग्रेस–एमालेसँग १६ बुँदे सम्झौता गर्न […]